Dubartoonni yeroo baay’ee teeleviizhinii daawwatan kaansarii mar’iimmaaniif saaxilamoodha -qorannoo – Fana Broadcasting Corporate
Dubartoonni yeroo baay’ee teeleviizhinii daawwatan kaansarii mar’iimmaaniif saaxilamoodha -qorannoo
Finifinnee, Amajjii 30, 2011 (FBC)- Dubartoonni umuriin isaanii waggaa 50 gadi ta’e yeroo baay’ee taa’uu fi teeleviizhinii daawwatan kaanseerii mar’iimmaaniif haammi saaxilamuu isaanii akka dabalu qorannoon mul’iseera.
Dubartoonni Ameerikaanotaa yeroo baay’ee taa’aanii fi teeleviizhinii daawwatan kuma 90 ol qorannichi keessatti hirmaataa ta’aniiru.
Haaluma kanaan dubartoonni sa’aa 1 oliif teeleviizhinii daawwatan dhibbeentaan 12 haammi kaanseerii mar’iimmaaniif saaxilamuu kan dabalu yoo ta’u, kanneen sa’aa lamaa ol daawwatan immoo hammi saaxilamuu isaanii dhibeentaa 75 ta’uu qoranichaan irra gahameera.
Haaluma walfakkaatun umuriin isaanii kanneen 25 hanga 42 kan ta’an, Narsoonni kuma 89 fi dhibba 278 akka lakkoofsa Awurooppanotaa 1991 calqabee waggaa 22f garee qorattootaa hordofaa turan.
Hordoffii yaalii godhameen dubartoota 118 kan ta’an irratti mallaattoon duraa kaanseerii mar’iimmaanii akka irratti argame mirkana’eera.
Dursaan qorannichaa Yiin Kaa’oo akka jedheetti, yeeroo baay’ee teessuma baay’isuun sababoota dhukkuba kaanseeriif nama saaxilan keessa tokko ta’uu mirkanneessuun danda’ameera.
Yaa’iin fayyaa damee Afrikaa gaggeeffamaa jira
Ji’atti yeroo tokko hojjettoonni sochii qaama ni hojjetu jedhame
Hoospitaalli Riifaraalii Dirree Dawaa Yuunvarsiitii Dirree Dawaaf dabarfamee laatame
Midiyaan hawaasaa yeroo hirriba daa’immani irratti dhiiba uumaa jiraachu himame